The Ab Presents Nepal » भिम रावल र मन्त्री ज्ञवालीको चर्काचर्की, देश माथी नाङ्गो आ,क्रमण हुँदा मन्त्री बोल्न नभ्याउने ? (भिडियो सहित)
काठमाण्डौं-: भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि बैठकमा विवाद भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा समितिले कुनै निर्णय नगरेपछि विवाद भएको हो ।
सांसद भीम रावलले देशको स्वा,धिनतामाथि हस्तक्षेप भएपनि समितिले बैठकको मिति तय गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । बैठक सकिएपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भरसक भोली नै बैठक बस्ने सोच हो र भोली मन्त्रीज्यूको समय मिल्यो र सदन नरहने अवस्थामा ११ बजे नै बैठक बस्छौँ ।
तर अहिले नै यसलाई म ढुंगो दिन सक्दिन’’ भनेपछि वि,वाद सुरु भएको थियो । लगत्तै रावलले ‘संसदको कुरा गर्नुभयो संसद के का लागि’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ? देशको सार्वभौम सत्तामाथि ना,ङप्गो हस्तक्षे,प भएको छ । अनि समय के का लागि हो । सरकार के का लागि हो । देश केका लागि ? यो भन्न मिल्दैन् । या अहिले समितिमा बोल्न पाउनुपर्छ या बैठकको समय निर्धारण हुनुपर्छ । माननिय सभापति ज्यू देशको सार्वभौम सत्ताको र,क्षाभन्दा ठूलो कुरा के हो ? मलाई सुनाउनुहोस् । बैठकको समय तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ । त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ । यसरी बैठकका विषयमा अहिले भन्न सक्दिन भन्न मिल्दैन् ।
लगत्तै सभापति निरौलाले ‘माननिय ज्यू गम्भिर विषयको छलफल हुनुपर्छ । आजै सक्न पाए हुन्थ्यो ।भनेपछि बाँझाबाँझ थपिएको थियो ।चर्काचर्कि,पछि मन्त्री ज्ञवालीले संसदका सबै समिति बराबर भएकाले सबैलाई समय दिनुपर्ने बा,ध्यताका कारण अहिले नै भन्न नसकिने बताउनुभएको थियो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक लगायतका विषयमा अन्य समितिहरुले पनि समय लिएका कारण समय तालमेल गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने बताउनुभएको थियो । आइतबारको समिति बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
केही प्रावविधिक कुरुहरु मिलाउन बाँकी रहेकाले नक्सा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले नक्सा सार्वजनिक नभएकै कारण लिपुलेक क्षेत्रको १८, १९ किलोमिटर भूमि मिचिएको हो भनेर नसोच्न पनि आग्रह गर्नुभयो । नक्सा जारी नभएको कारण सीमा न,मिचिएको उहाँको दा,वी छ । उहाँले भन्नुभयो , ‘मैले जुन अघि १८, १९ किलोमिटरको कुरा गरे त्यो त २०३२ सालमा जारी भएको नेपालको नक्सामै लिपुलेक लगायतका क्षेत्र छन् । नक्सा नभएको कारणले बाटो गएको नभएको कारणले नगएको भन्ने होइन् ।
प्रकाशित मिति May 10, 2020